September 6, 2021 - Celegroup
September 6, 2021 cele group 0
ကမ္ဘာ့ငွေကြေးအဖောင်းပွဆုံး ၁၀နိုင်ငံ စာရင်းထဲဝင်သွားတဲ့ မြန်မာ
ပြည်သူရွေးချယ်ထားသည့် အစိုးရကို ဖမ်းဆီးကာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး ၆လအကြာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးတန်ဖိုး ဇောက်ထိုးကျဆင်းကာ ကမ္ဘာ့ပေါ်တွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအများဆုံး ၁၀နိုင်ငံ စာရင်းသို့ ဝင်ရောက်သွားသည်။ ဩဂုတ်လ နောက်ဆုံးသီတင်းပတ်က ထုတ်ပြန်သည့် ဂျွန်စ်ဟော့ပ်ကင်းတက္ကသိုလ် Hanke ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းမှာ ၃၁ ရာခိုင်းနှုန်းရှိကာ အီရန်ကို ကျော်လွန်ပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့် ၉သို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ ပြည်သူ့အစိုးရ နောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီလကုန် ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းတွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ […]
နှောင်းလူတွေမသိတော့တဲ့ ဝါတွင်းမင်္ဂင်္လာမဆောင်ရခြင်း နှင့် ဗိဿနိုးနတ် အိပ်စက်ခြင်း ဆက်စပ်သော အယူအဆ
နှောင်းလူတွေမသိတော့တဲ့ ဝါတွင်းမင်္ဂင်္လာမဆောင်ရခြင်း နှင့် ဗိဿနိုးနတ် အိပ်စက်ခြင်း ဆက်စပ်သော အယူအဆ ဝါတွင်း၌ မင်္ဂလာမဆောင်ရခြင်းအကြောင်း ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားသော မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဝါတွင်းကာလများတွင် မင်္ဂင်္လာဆောင်လေ့ မရှိကြပါ။ မင်္ဂလာဆောင်လေ့ မရှိကြသည့်အပြင် ခိုးရာလိုက်ခြင်း၊ နှစ်ဦးသဘောတူလက်မှတ်ထိုးထားခြင်းများပင် ပြုလုပ်ထားလေ့ မရှိကြပါ။ မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ဝါတွင်းကာလတွင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားယူကြပြီဆိုလျှင် ထိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားသူများကို ရစရာမရှိအောင် ပစ်ပစ်ခါခါ ပြောတတ်ကြသည်။ သို့ဖြစ်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဝါတွင်းကာလတွင် အဘယ့်ကြောင့် မင်္ဂလာမဆောင်ကောင်းပါသနည်း။ ဤအမေးမှာ လွန်စွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော မေးခွန်းပင် […]
အပျိုတွေဖြစ်လျက် နဲ့ အိမ်ထောင်သည် ယောကျ်ား ကို မှ စွဲလန်းကြ ရ တဲ့ အကြောင်းရင်း (၅) ချက်
ခုနောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ တော်တော်များများမှာ အပျိုလေးတွေက ဗီလိန်ဖြစ်နေတာကို အားလုံးလည်း တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဘာကြောင့် အပျိုတစ်ယောက်က ရုပ်ရည်လည်း ရှိရက်သားနဲ့၊ ပညာအရည်အချင်းလေးလည်း ရှိရဲ့သားနဲ့ အိမ်ထောင်သည် ယောကျ်ားကိုမှ သိက္ခာအကျခံပြီး တွဲနေရလဲဆိုတာ အားလုံး သိချင်နေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းလေးတွေရဲ့အဖြေကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် (၁) ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့ ယောကျ်ားမှန်းသိနေလို့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ ယောကျ်ားတစ်ယောက် ဖောက်ပြန်ချင်စိတ် ရှိနေတယ် ဆိုတာ အလိုလို သိကြပါတယ်။ သူတု့ိဖက်က ချစ်နေရင်တောင် […]
နေအိမ်အောက်တွင်တောင်ပို့ပေါက်သည့်အခါတချို့လူများကအိမ်ကိုဖျက်ဆီးမည်ဟုသဘောထားကာတောင်ပို့ကိုတူးဆွဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ကြသည်တချို့လူများကတော့ ကောင်းကျိုးပေးမည့်အရာဟုသဘောထားပြီးရာဇမတ်လေးဖက်လေးတန်ကာ၍တံခွန်၊ကုက္ကား၊မုလေးပွားများစိုက်၊အမွှေးနံ့သာများပက်ဖျန်းကြသည်ဖယောင်းတိုင်၊အမွှေးတိုင်များကို အဆက်မပြတ်ထွန်းညှိပူဇော်ထားကြသည်တောင်ပို့ကတစ်စထက်တစ်စမြင့်တက်လာရာအိမ်ကဆင့်တန်းဖြုတ်၊ခင်းထားသောပျဉ်ချပ်များကို ခွာပစ်ရသည်အထိယုံကြည်ကိုးစားစွာ ဖြင့်ရိုသေစွာထားကြသည်ကိုလည်းတွေ့ဖူးသည်။ညီငယ်လေးပမာခင်မင်ရသောသက်ကိုကသူ၏အိမ်အောက်တွင်တောင်ပို့ပေါက်လာသည့်အခါအဆိုပါတောင်ပို့ကိုသည်အတိုင်းပဲထား ရမည်လား၊တောင်ပို့ကို ဖြိုချပစ်ရမည်လားဟုမေးခဲ့ဖူးပါသည်များစွာသောလူတို့သည်အိမ်ထဲသို့မဟုတ်ခြံဝင်းထဲ၌တောင်ပို့ပေါက်လာလျှင်ကောင်းသည်ဟုသာထင်မှတ်ကြလေ သည်ရှေးလူကြီးသူမတို့ကမူကောင်းကျိုး၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သောတောင်ပို့ပေါက်မှုနှင့်မကောင်းကျိုး၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သောတောင်ပို့ပေါက်မှုဟူ၍နှစ်မျိုးရှိကြောင်းဆိုခဲ့ကြပေသည် ရှေးလူကြီးသူမတို့သည်အကြားအမြင်၊ ဗဟုသုတရင့်ကျက်ကြသူများပီပီနောင်လာနောက်သားတို့တောင်ပို့ပေါက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကိုသိမြင်မှတ်သားလိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ကဗျာလင်္ကာများစပ်ဆို ထားခဲ့ပေသည၎င်းလင်္ကာမှာ၁အရှေ့တောင်ခွင်၊တောင်ပို့ထင်၊မီးလျှင်လောင်တတ်စွ၂အနောက်ပေါက်ငြား၊အောက်လူများနာ ဖျားဘေးဒဏ်ရ၃အနောက်တောင်တွင်၊တောင်ပို့မြင်၊သူလျှင် ခိုးတတ်လှ၊၄ကြင်းငါးရပ်မှာ၊ပေါက်ရောက်လာ၊မှန်စွာချမ်းကြည်မြ၊၅မကောင်းရပ်နေ၊ပေါက်လာပေ၊ရွှေရည်လောင်း လေကြ၊၆။ဤသို့ယတြာ၊ပြုသောခါ၊ရောဂါရန်ကွယ်ဟူ၍ဖြစ်သည်။အဋ္ဌလဂ်ခွင်အရအရပ်ရှစ်ပါးရှိရာ၁အရှေ့မြောက်အရပ်၊၂အရှေ့အရပ်၊၃အရှေ့တောင်အရပ်၊၄တောင်အရပ်၊ ၅အနောက်တောင်အရပ်၊၆အနောက်အရပ်၊၇အနောက် မြောက်အရပ်၊၈မြောက်အရပ်ဟူ၍ဖြစ်လေသည်အိမ်အတွင်း၊ခြံဝင်းအတွင်းတောင်ပို့ပေါက်သောအရပ်သည်မည်သည့် အရပ်၌ဖြစ်သည်ကိုတိကျစွာသတ်မှတ်ရပါမည်။ရှေးလူကြီးသူမတို့မိန့်ဆိုခဲ့သောကဗျာလင်္ကာအရတောင်ပို့ပေါက်သောအရပ်သည်အရှေ့တောင်ထောင့်အရပ်ဖြစ်ပါကအိမ်ကို မီးလောင်တတ်သည်အနောက်အရပ်တွင်ဖြစ်ပါကလူငယ်လူရွယ်များနာဖျားတတ်သည်။ဘေးရန်သင့်တတ်သည်အနောက်တောင်အရပ်တွင်ဖြစ်ပါကနေအိမ်တွင်သူခိုးခိုးခံ ရတတ်သည်။ကျန်သည့်အရပ်ငါးမျိုးတွင်တောင်ပို့ပေါက်ပါကစည်းစိမ်ဥစ္စာကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာမည်ဟုဆိုလိုပေသည်မကောင်းသောအရပ်တွင်တောင်ပို့ပေါက်လျှင်မည်သို့ ပြုလုပ်ရမည်ကိုရှေးဗေဒကဝိတို့ကယတြာထားခဲ့ကြသည်။၎င်းယတြာမှာမိမိအိမ်သောက်ရေအိုးထဲမှရေကိုခပ်၍မကောင်းသောဘေးအန္တရာယ်များပပျောက်ပါဟေုဆုတောင်း ကာပေါက်လာသည့်တောင်ပို့ပေါ်သို့နောက်ပြန်လောင်းရပေမည်။နေအိမ်(သို့မဟုတ်)ခြံဝင်းထဲ၌တောင်ပို့ပေါက်ပါကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေဘဲကောင်းကျိုးလား၊မကောင်းကျိုးလား ဆိုသည်ကိုအထက်ပါလင်္ကာအရဆန်းစစ်ကာမကောင်းကျိုးဖြစ်ပါကယတြာချေရုံသာရှိပါတော့သတည်းဝင်းဇော်သုံးဆယ်ရွှေပေါက်ဆိန်ဂျာနယ်အတွဲ(၃)၊အမှတ်၆၀တွင်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်) credit Zawgyi ေနအိမ္ေအာက္တြင္ေတာင္ပို႔ေပါက္သည့္အခါတခ်ိဳ႕လူမ်ားကအိမ္ကိုဖ်က္ဆီးမည္ဟုသေဘာထားကာေတာင္ပို႔ကိုတူးဆြဖယ္ထုတ္ပစ္လိုက္ၾကသည္တခ်ိဳ႕လူမ်ားကေတာ့ ေကာင္းက်ိဳးေပးမည့္အရာဟုသေဘာထားၿပီးရာဇမတ္ေလးဖက္ေလးတန္ကာ၍တံခြန္၊ကုကၠား၊မုေလးပြားမ်ားစိုက္၊အေမႊးနံ႔သာမ်ားပက္ဖ်န္းၾကသည္ဖေယာင္းတိုင္၊အေမႊးတိုင္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ထြန္းညႇိပူေဇာ္ထားၾကသည္ေတာင္ပို႔ကတစ္စထက္တစ္စျမင့္တက္လာရာအိမ္ကဆင့္တန္းျဖဳတ္၊ခင္းထားေသာပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားကို ခြာပစ္ရသည္အထိယုံၾကည္ကိုးစားစြာ ျဖင့္႐ိုေသစြာထားၾကသည္ကိုလည္းေတြ႕ဖူးသည္။ညီငယ္ေလးပမာခင္မင္ရေသာသက္ကိုကသူ၏အိမ္ေအာက္တြင္ေတာင္ပို႔ေပါက္လာသည့္အခါအဆိုပါေတာင္ပို႔ကိုသည္အတိုင္းပဲထား ရမည္လား၊ေတာင္ပို႔ကို ၿဖိဳခ်ပစ္ရမည္လားဟုေမးခဲ့ဖူးပါသည္မ်ားစြာေသာလူတို႔သည္အိမ္ထဲသို႔မဟုတ္ၿခံဝင္းထဲ၌ေတာင္ပို႔ေပါက္လာလွ်င္ေကာင္းသည္ဟုသာထင္မွတ္ၾကေလ သည္ေရွးလူႀကီးသူမတို႔ကမူေကာင္းက်ိဳး၏ေရွ႕ေျပးျဖစ္ေသာေတာင္ပို႔ေပါက္မႈႏွင့္မေကာင္းက်ိဳး၏ေရွ႕ေျပးျဖစ္ေသာေတာင္ပို႔ေပါက္မႈဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္းဆိုခဲ့ၾကေပသည္ ေရွးလူႀကီးသူမတို႔သည္အၾကားအျမင္၊ ဗဟုသုတရင့္က်က္ၾကသူမ်ားပီပီေနာင္လာေနာက္သားတို႔ေတာင္ပို႔ေပါက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္းကိုသိျမင္မွတ္သားလိုက္နာ […]
ဘယ္ေယာက်္ားေလးမွ ေတာင့္မခံႏိုင္တဲ့မိန္းကေလးတို႔ရဲ႕ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံးအရာမ်ား
မိန္းကေလးေတြ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိဖို႔ဆိုတာ ခက္မလိုလိုနဲ႔ အရမ္းကို ႐ိုးရွင္းလြန္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သူေတြကေတာ့ ကိုယ္ေမြးကတည္းက ပါလာတဲ့အရာကို ထုတ္မသုံးတတ္ၾကတာပါ။မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ဆြဲေဆာင္မႈ အရွိေစဆုံးေသာ အရာေတြကေတာ့ ဒီမွာပါေနာ။ ၁- ႏႈတ္ခမ္း ကိုက္တာ”မိန္းကေလးေတြ ႏႉတ္ခမ္းကိုက္လိုက္တာဟာ ေယာက်ၤားေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေမတၱာတင္မကပဲႏႈတ္ခမ္းတစ္စုံက အာ႐ုံ စူးစိုက္မႈကိုပါ ရရွိေစႏိုင္ပါတယ္ …။ ၂- ႏူးညံ့တဲ့ အသားအရည္အသားရည္ ႏူးညံ့တဲ့ မိန္းကေလးေတြထက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတာ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ေရွးေခတ္ကတည္းက အီဂ်စ္လူမ်ိဳးေတြ ေရာမလူမ်ိဴးေတြက […]
အားလုံးသတိထားကြပါရန် – မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ်တွင် ငွေစက္ကူအတု တစ်သောင်းတန်တွေ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိ..
အားလုံးသတိထားကြပါရန် – မြန်ျပည္နယ် ရေးျမို့နယ္တြင် ငြေစက္ကူအတု တစ်သောင်းတန်တြေ ပ်ံ့နွံ့လ်က်ရွိ.. မြန်ျပည္နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ အာယုတောင်ကေ်းရြာမွာ အခုရက္ပိုင်းမွာ ျမန္မာက်ပ်ငြေစက္ကူအတု က်ပ် တစ်သောင်းတန်တြေ ပ်ံ့နွံ့နေတယ္လို့ ဒေသခံတြေက ေျပာပါတယ်။ ဒေသခံရြာသားတစ်ဦးက “အခုပ်ံ့နွံ့နေတဲ့ ငြေစက္ကူအတုမွာ က်ပ္တစ်သောင်းတန်တြေ ျဖစ္တယ်။ အခုရြာကလူတြေ လက်ဝယ္မွာ ပ်ံ့နွံ့သေလာက်ျပန့်နေပြီး လူတြေက အမ်ားအားျဖင့် သာမန်ငြေစက္ကူလိုပဲ ထင်ကြတယ်။ အတုအစစ် ခြဲျခားဖို့ဆိုတာက ေငြေကြးကြျမ်းက်င်သူတြေက အသိပညာပေးတြေလည်း လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ […]
စေတနာနဲ့ မထိုက်တန်သူကို စေတနာ သိပ်မထားနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ စေတနာ တွေ စော်ကားခြင်း ခံရတတ်တယ်အလေးအနက် မထားတတ်တဲ့သူအပေါ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ပုံမအော မိစေနဲ့။ တစ်နေ့ သစ္စာဖောက်ခြင်း ခံရတတ်တယ် တန်ဖိုးမသိတဲ့ သူကို တန်ဖိုးအကြောင်း မရှင်းပြမိစေနဲ့။။တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိတာမို့ပါ အရှက်သိက္ခာမဲ့သူကို ရင်းရင်းနှီးနှီးကြီး မပေါင်းသင်းမိစေနဲ့။”တံငါနားနီ တံငါ ၊ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး” ဆိုသလို အကျင့်စရိုက်တွေ ကူးစက်တတ်လို့ ကျေးဇူးကန်းတတ်သူကို ကျေးဇူးမပြုမိပါစေနဲ့။ကျေးဇူးတင် မခံရတာ ပြသနာမရှိပေမယ့်ကျေးဇူးကန်းရင် ဒေါသဖြစ်ရလို့ဂတိမတည်သူနဲ့အတူ […]
အခုခေတ်ကြီးမှာ ဖုန်းတစ်လုံးမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာ မတွေးရဲစရာပါပဲ။ဒါဟာသတင်း၊ အလုပ်၊ စာအုပ်၊ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂိမ်း၊ အင်တာနက် စတာတွေကိုတစ်နေရာတည်းမှာချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ဘက်ထရီကကုန်ကုန်သွားတတ်တဲ့အတွက် တစ်နေ့တာအသုံးပြုဖို့တောင်မလုံမလောက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ အခုလိုနည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ လူအများစုဟာ ဘက်ထရီသွင်းတဲ့အပေါက်ကိုသန့်ရှင်းရေးမလုပ်ကြပါဘူး။ သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအမြဲတမ်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့သတိရပါ။ ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုသာသန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အားသွင်းတဲ့အပေါက်ကိုလဲသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရပါမယ်။ ထိပ်အချွန်ပါတဲ့ နားကြပ်တံ ဒါမှမဟုတ် သွားကြားထိုးတံနဲ့သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ၂။တောက်ပတဲ့ Wallpaper ထားခြင်း အချိန်၊ Messages နဲ့ Missed calls တွေကိုသင့်ဖုန်းမှာသင်တစ်ချိန်လုံးလိုလိုကြည့်နေရတာပါ။ […]
” မိန်းခလေးတိုင်း ဖတ်ဖို့ “
” မိန်းခလေးတိုင်း ဖတ်ဖို့ ” (1) မိန်းကလေးဆိုတာ အချိန်တိုင်းမှာ အမြဲတမ်း မသန်မာနိုင်ဘူး…တစ်ခါတစ်လေကျရင် အခန်းထောင့်လေး တစ်နေရာ မှာ ငိုခွင့်ရှိတယ်။ (2) ”ခေါင်းကိုမတ်ထား ရင်ကိုကော့ထား” စိတ်ဓာတ်ကို မြင့်မြင့်ထားပြီး သတ္တိရှိရှိသန်မာပြလိုက်စမ်း။ မင်းဟာ မင်းကမ္ဘာရဲ့ ရေမြေ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်…ဘယ် ဘဝမုန်တိုင်းမှ မင်းကမ္ဘာကို မရိုက်ခတ်စေနဲ့…မဖျက်ဆီးစေနဲ့။ (3) ပြောင်းလဲမှုဆိုတာ ခက်ခဲတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို မကြောက်နဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ဆံပင်အရှည်လေးထက်စာရင် ဆံပင်အတိုလေးနဲ့က ပိုလိုက်ဖက် […]
အရင်တုန်းကမသိခဲ့တဲ့ “အပ်”ပျောက်ရင်”ဆင်”နဲ့ရှာပါ ဆိုတဲ့ စကားပုံရဲ့ အဓိပ္ပါယ်
အရင်တုန်းကမသိခဲ့တဲ့ “အပ်”ပျောက်ရင်”ဆင်”နဲ့ရှာပါ ဆိုတဲ့ စကားပုံရဲ့ အဓိပ္ပါယ် “အပ်”ပျောက်ရင်”ဆင်”နဲ့ရှာပါ ဒီရှေးစကားလေးကို ငယ်စဉ်ထဲက ကြားဖူးနားဝရှိခဲ့တာကြာပါပြီ သို့သော်ငြား အဲဒီစကားကို အရင်တုန်းကတော့ သာမန်အပေါ်ယံအတွေးလေးနဲ့တွေးမိခဲ့ ဖူးပါတယ် “အပ်ကလေးတစ်ချောင်းပျောက်တာများ ဆင်စီးပြီးရှာစရာလား”ဆိုတဲ့အတွေးထက်ပိုပြီး နက်နက်နဲနဲမတွေးမိ မစဉ်းစားမိခဲ့ဘူး နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ စာပေဗဟုသုတတွေ ဖတ်မှတ်လေ့လာရင်းနဲ့ အမြင်မှန်ရသွားခဲ့ရပါတော့တယ် (အပ်ပျောက်ရင် ဆင်နဲ့ရှာ)ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ စကားလေးဟာ အင်မတန်မှ လေးနက်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ ပညာရှိ သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စကားဆိုတာ မိမိရဲ့ အသိဉာဏ်မှာ ပွင့်လင်းသွားပါတော့တယ် တစ်ကယ်တော့”အပ်”ဆိုတာက […]
အေမ မရွိေတာ့တဲ့ ေနာက္ ( မ်က္ရည္ခိုင္မွဖတ္ၾကပါ )😢😢😢
အေမေသဆုံးသြားတဲ့ေန႔မင္းအေမ ဆုံး ……သြားၿပီ….နင့္အေမ ေသ ……သြားၿပီဆိုတဲ့ အသံမ်ိဳးကိုအေမဆုံးရႈံးခဲ့ရဖူးသူတိုင္း ၾကားခဲ့ရတဲ့ စကားလည္းျဖစ္သလို…မၾကားခ်င္ဆုံး စကားတစ္ခြန္းလည္းျဖစ္မွာပါ။အဲဒီအခ်ိန္အခိုက္တန္႔ေလးမွာ ခံစားရတဲ့ခံစားခ်က္က….ငိုခ်င္ေပမယ့္ မ်က္ရည္မထြက္ခဲ့ဘူး….အသံထြက္ခ်င္ေပမယ့္ ဆြံ႕အသြားခဲ့တယ္….အဲဒါက ဘဝမွာလုံးဝေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ….ေတြ႕ႀကဳံလိုက္ရတဲ့ အံ့ၾသျခင္းေၾကာင့္ပဲ။ ခဏအၾကာမွ ကမာၻႀကီးမီးေလာင္သြားသလို….ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံး အပူေတြတက္လာတယ္….ဝမ္းေခါင္းထဲကေန အသံနက္ႀကီးနဲ႔…. အသံတစ္သံထြက္က်လာခဲ့တယ္ေလ….အဲဒါက အေမ ……ဆိုတဲ့စကားတစ္ခြန္းေပါ့။ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ဘူး….အေၾကာက္တရားေတြလည္းကင္းေနပီ…. အေမ့ကိုဖက္ဖက္ၿပီး ငိုေႂကြးျခင္းေတြနဲ႔အတူ…ရင္ထဲမွာ တကယ္အသိတစ္ခုရွိေနတာက ေနာက္ေန႔ေတြကစတင္ၿပီး….လက္က်န္ဘဝရဲ႕ အခ်ိန္တိုင္း အခ်ိန္တိုင္းမွာ…ငါဟာ အေမလို႔ေခၚခြင့္မရွိေတာ့တဲ့သူလို႔။ အ႐ြယ္ေရာက္လာျပန္ေတာ့ အားအင္ေတြအျပည့္နဲ႔…ထမင္းတစ္လုတ္ေလာက္ေတာ့ အေမ့ကိုေကြၽးခ်င္ေမြးခ်င္ခဲ့တယ္…ဒါေပမယ့္ အေမက ေဘးနားမွာရွိမေနေတာ့ဘူး။သူမ်ားသားသမီးေတြ အေမ […]